The First Burmese Migrants’ invasion from China, to colonize and settle in Pagan (in Burmese) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Remember That Anything is Possible! (poem by Dena Dilaconi)
Globalization and Brain Drain (in Burmese) »
The First Burmese Migrants’ invasion from China, to colonize and settle in Pagan (in Burmese)
မြန်မာတို့ ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်နေထိုင်ခြင်း
အရှေ့တောင်အာရှ မြို့နိုင်ငံတွေကို ၀င်ရောက်လုယက် ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ နန်ကျောင်စစ်တပ်ကြီးမှာ မန်းမန်တွေ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခရစ် ၈၃၂ နဲ့ ၈၃၅ အတွင်း လုယက်ဖျက်ဆီးတယ်။ မန်းမန် တပ်သားတွေဟာ သတ္တိရှိတယ်။ သစ္စာရှိတယ်လို့ ဂုဏ်သတင်းကြီးတယ်။ မန်းမန် တပ်သားတယောက်ကို ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပဲ ရိုက်နှက်စစ်ဆေးပေမယ့် စစ်တပ်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို မေးမရပါ။အဲဒီ လူတွေဟာ စစ်တိုက်ခိုက်တာကို အစကပဲ နှစ်သက်သူတွေ ဖြစ်ပေမယ့် နန်ကျောင်ခိုင်းသလို အကြာကြီး လှည့်လည် လုယက်တိုက်ခိုက်နေလို့ မဖြစ်နိုင်လို့ သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ခရစ် ၉ရာစုနှစ် လယ်က စပြီး နန်ကျောင်အုပ်စိုးတဲ့ ပြည်နယ်ထဲက ထွက်ခွါလာခဲ့တယ်။ အရှေ့တောင် အာရှတခွင် နေရာအများကို ရောက်ဖူးပြီး ဖြစ်ပေမယ့် ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံ မြေပြန့်ဒေသတွေကိုသာ သူတို့ရဲ့ အိုးအိမ်သစ် ထူထောင်ဖို့ ကောင်းတဲ့နေရာလို့ ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ ပူအိုက် စွတ်စိုပြီး ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ သေတတ်တဲ့ ရပ်ရွာဒေသကို ကြောက်လို့ ပူအိုက်ခြောက်သွေ့တဲ့ ဒေသကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနယ်မြေကို သိတဲ့အပြင် ရှိရင်းစွဲလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုလည်း သိလို့ သူတို့ဝင် လာတာကို မခုခံမဲ့ လမ်းက ၀င်တယ်။ သံလွင်မြစ်ကို စုန်ဆင်းပြီး မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်ကိုကျော် အရှေ့တောင်ထောင့်က ဖြတ်ဝင်တယ်။ အဲဒီနောက် စားသုံးရန် ကောက်ပဲသီးနှံ အများဆုံးထွက်တဲ့ ကျောက်ဆည်နဲ့ မင်းဘူးဒေသတွေကို သိမ်းယူတယ်။ မြောက်ဘက်မှာ မန္တလေးဝန်းကျင်၊ တောင်ဘက်မှာ မိချောင်းရဲဝန်းကျင်တွေမှာ အစောင့်တပ် ချထားတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေ ၀င်ရောက်လာတာဟာ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်နယ်သိမ်းယူလိုက်တဲ့ သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။ မွန်၊ ကဒူး၊ ပျူ၊ သက်၊ ပေါင်လောင်း နဲ့ စကြောလူမျိုးတွေ ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ အလယ်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းရာမှာ လွယ်ကူပါတယ်။ နိုင်ငံသစ်ရဲ့ ဗဟိုအရပ်ကို ပုဂံဟု သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ခရစ် ၉ ရာစုနှစ် အလယ်မှာ မြန်မာတွေက မြန်မာရဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့အရပ်မှာ အခြေချပြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။
ခြောက်သွေ့အရပ်မှာ နေဖို့ ဆုံးဖြတ်တာဟာ မိုးများတာကို မကြိုက်လို့ ဖြစ်တယ်။ ပျူ၊ ပေါင်လောင်နဲ့ မွန်တွေကိုလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်း နိုင်ပါတယ်။ မကြာခင် ရှိရင်းစွဲ လူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့ ထုံးစံတွေကို မြန်မာတွေ နှစ်သက် သုံးစွဲလာတဲ့အတွက် အောင်နိုင်သူတွေ ကျဆုံးပြီလို့ ပြောဆိုတာ ခံရပါတယ်။ စစ်လိုလားသူ တွေဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်တဲ့ တောင်သူဘ၀ကို ကူးပြောင်းလာပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာမှာလည်း သက်ဝင်ယုံကြည် လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပင်ကိုယ်သဘောဖြစ်တဲ့ စစ်အလေ့အကျင့် မပျောက်ဘဲ အရေးရှိရင် ရှိတဲ့အတိုင်း လူမြန်မြန် စုပြီး လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ မြေကတုတ်နဲ့ စစ်ဆင်တိုက်နည်းကို အထူးကျွမ်းကျင် တယ်။
ကျောက်ဆည်နဲ့ မင်းဘူး အရပ်ဒေသတွေမှာ ရှိရင်စွဲ မွန်နဲ့ ပေါင်လောင်လူမျိုးတွေဆီက ဆည်ရေသောက် စပါးစိုက်နည်းကို ခပ်မြန်မြန် သင်ယူတတ်မြောက်ပြီးတော့ သူတို့လည်း တောင်သူ လယ်သမားတွေ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ မကြာခင် တောရိုင်းတွေကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး စိုက်ပျိုးမြေ ဧရိယာကို ဆည်မြောင်းတွေနဲ့ ရေသွင်းပြီး ယပ်တောင်ဖြန့်လိုက်သလို ရွှေဘို၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးနဲ့ တောင်တွင်းဒေသတွေမှာ လယ်စိုက် ကြတယ်။ မြေသြဇာညံ့တဲ့ အရပ်တွေမှာ ထန်းဥယျာဉ်၊ ကွမ်းသီး ဥယျာဉ်တွေကို စိုက်တယ်။ တနှစ်မှာ တကြိမ် မြစ်ရေလျှံတဲ့ ဒေသတွေမှာ ပဲမျိုးစုံ စိုက်တယ်။ မြေညံ့လွန်းရင် ပြောင်းနဲ့ နှမ်းစိုက်တယ်။ စိုက်ပျိုးရာမှာ အလေအလွင့် မရှိအောင် မြေကို အသေးစိတ် အသုံးချတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စိုက်ပျိုးတဲ့ မြေဧရိယာကို တတ်နိုင်သလောက် ကျယ်ပြန့်စေဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးကို သုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန်းခြောက်ဒေသ တခုလုံး ကောက်ပဲသီးနှံ ဖြစ်ထွန်းလာတာဟာ အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ အောင်မြင်မှုတရပ် ဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ့ မြန်မာတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားတွေ အဲဒီလို အစွမ်းထက်ပါတယ်လို့ ဂုဏ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးတယ်ဆိုရာမှာ ကိုယ့်မိသားစု တနှစ် ၀မ်းစာရရုံလောက် စိုက်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းစွာ နေခွင့်ရလာတဲ့အခါ မြန်မာလူဦးရေဟာ အလျင်အမြန် တိုးတက်လာတယ်။ ဒီတော့ စိုက်ခင်းနယ်မြေကို မချဲ့မဖြစ် ချဲ့ရပါတယ်။ အုပ်စိုးတဲ့ နယ်မြေကိုလည်း တိုးချဲ့နိုင်တယ်။ အရင်းမူလပြုတဲ့ ဒေသအပြင် တိုးလာတဲ့ ဒေသကို ပေါင်းစပ်လို့ ခရစ် ၁၁ ရာစုနှစ် အလယ်က စပြီး နိုင်ငံဟု ထင်ရှား ပေါ်ပေါက်ပြီး နိုင်ငံထူထောင်ရာမှာ ပထမဆုံး ထင်ရှားတဲ့ မင်းဟာ အနိရုဒ္ဓ ခေါ် အနော်ရထာမင်းစော ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆည်ရေသောက် လယ်စိုက်တာကို မွန်တို့က စတယ်လို့ သိရတယ်။ မြန်မာတို့က ဆည်ရေသောက် လယ်စနစ်ကို အလျင်အမြန် နည်းယူတတ်မြောက်ပြီး မြန်မာ့အလယ်ပိုင်း လွင်ပြင်အနှံ့ မြို့ရွာ တည်ထောင်ကာ ဆည်ရေသောက် လယ်တွေ တိုးချဲ့ခဲ့တယ်။ အပြင်းအထန် ကြိုးစားနိုင်လို့လည်း ခန်းခြောက်ဒေသနယ် တခုလုံးနီးနီး ကောက်ပဲသီးနှံ ဖြစ်ထွန်းလာတာ ဖြစ်တယ်။ ၁၁ ရာစုနှစ်မှာ နောက်ထပ် နယ်ချဲ့ နိုင်တဲ့အခါ မြန်မာနယ်ဟာ မြောက်ဘက်ကို ဗန်းမော်အထိ၊ တောင်ဘက်ကို ဘိတ် အထိ ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ အဲဒီအခါက ပင်လယ်ရပ်ခြား ရောင်းဝယ်မှုမှာ အချက်အချာဖြစ်တဲ့ စလင် အငူကိုပါ ခေတ္တခဏ သိမ်းယူနိုင်တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလူ တောင်ဘက်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်လို့ ခရစ် ၁၁၆၅ မှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ စစ်မက်ဖြစ်ပွါးခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာတွေ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာ ရောက်ရှိနေထိုင်ပုံ
မြန်မာတွေဟာ လျင်မြန်ထက်မြက်ပြီး စစ်တိုက်ဖို့ ၀န်မလေးသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းစီးကျော်များ ဖြစ်တဲ့အပြင် လေးမြားကျွမ်းကျင်သူတွေလည်း ဟုတ်တယ်။ မြန်မာမြေပြန့်ကို ကိုးရာစု နှစ်လယ်လောက်ကစပြီး ၀င်ရောက်နေထိုင်တယ်။ ဦးစွာ ကျောက်ဆည်နယ်နဲ့ မင်းဘူးနယ်မှာ ရွာတည်ပြီး အခြေချ နေထိုင်ကြတယ်။ အဲဒီလို သူတို့ စတင်နေထိုင်တဲ့ အရပ်ကို ခရိုင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ခရိုင်က တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ပြီး အလယ်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတခုလုံးမှာ မြို့ရွာတည်ပြီး နေကြတယ်။ နောက်မှ ပြန်ပွါးတဲ့နေရာကို တိုက်လို့ ခေါ်တယ်။ ခြေတံရှည်နဲ့ အိမ်တွေကို သစ်၊ ၀ါး၊ သက်ကယ်တွေနဲ့ ဆောက်တယ်။မြန်မာအလယ်ပိုင်းကို ၀င်မလာမီ မူလမြန်မာတွေဟာ အရင်အနှစ် ၄၀၀၀ လောက်ကစပြီး တရုတ် အနောက်မြောက် ကန်စူဒေသ၊ ထောင်မြစ်ဝှမ်းမှာနေတယ်လို့ ယူဆတယ်။
သက်သေအခိုင်အမာ မရှိပေမယ့် အခုလို ပြောပြချက်ကို ငြင်းပယ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ခရစ် ၇ ရာစုမှာ မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကို လာရောက်နေထိုင်တဲ့ တိဗက်မြန်မာနွယ်ဝင်တွေကို မန်လူမျိုးလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီလူမျိုးတွေထဲက မန်းမန်ခေါ်တဲ့ လူတွေဟာ ကိုယ့်အကြီးအကဲကို မင်း၊ မင်းစောလို့ ခေါ်လေ့ရှိလို့ သူတို့ကို တရုတ်က မန်းမန်လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ လူတွေထဲက တချို့တ၀က်က သိုးမွေးပြီး တချို့တ၀က်က တောင်သူ ဖြစ်တယ်။ လယ်ယာကို ဆင်နဲ့ ထွန်တယ်လို့တောင် ပြောတယ်။ သူတို့က ထကြွလုံ့လရှိပြီး စစ်လိုလားတယ်။
စစ်ပွဲမှာ လှံလျင်ကို ကောင်းကောင်း အသုံးပြုတတ်တယ်။ မြင်းစီးတော်လို့ သူတို့ မြင်းစီးပုံဟာ ကောင်းကင်မှာ ငှက်ပျံသလို မြင်ရတတ်လို့ ချီးမွမ်းလေ့ရှိတယ်။ မြင်းကို ကုန်းနှီးမပါဘဲ ကောင်းစွာ စီးတတ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ မြင်းစီးကျွမ်းတယ်လို့ လူစိမ်းတွေက ပြောလေ့ရှိတယ်။ လေးမြားအတတ်ကို များစွာ ကျွမ်းကျင်ပြီး ရန်သူကို အဆိပ်လူးမြားနဲ့ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းလေ့ ရှိတယ်။
နေအိမ်ဆောက်ရာမှာ အိမ်အဆင့်မြင့်မြင့် ခြေတံရှည်ရှည် ဆောက်တယ်။ အပြာရောင် ဘောင်းဘီဝတ် တယ်။ ပိုးခေါင်းပေါင်းအနီပေါင်းပြီး ခေါင်းပေါင်းစတခုကို အပြင်မှာ လွှင့်ချထားတယ်။ အိမ်ကြက်မွေးတယ်။
နန်ကျောင် လူမျိုးတို့က ၈ ရာစုနှစ် အစောပိုင်းမှာ သူတို့ကို ချုပ်ချယ်လာတယ်။ ခရစ် ၇၉၄ ကစပြီး နန်ကျောင် လက်အောက်ရောက်တယ်။ အခုပြောတာတွေက ခရစ် ၈၆၃ မှာ ဖန်ချိုရေးတဲ့ မန်ရှူခေါ် တောင်ဘက်လူရိုင်းတွေ အကြောင်း စာအုပ်ကနေ ကောက်နှုတ်ထားတာ ဖြစ်တယ်။
မြေပြန့်ကို မြန်မာတွေ ၀င်လာတဲ့ လမ်းကတော့ သံလွင်မြစ်တလျှောက် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကို ဖြတ်ပြီး ကျောက်ဆည်ကို အရှေ့တောင်ဘက်က ၀င်တယ်။ ဆန်ရေစပါး ပေါများတဲ့ အရပ်ကို ရွေးချယ်ပြီး သိမ်းတယ်။ စစ်မှုရေးရာမှာ ခုခံအားကောင်းမယ်လို့ ထင်တဲ့ ပုဂံကို ဌာနချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်တယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေ ဗဟိုမြေပြန့်ကို ၀င်ရောက်နေထိုင်တာဟာ စစ်အင်အားနဲ့ တိုက်ခိုက် သိမ်းယူတာမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
[မုံရွေးစာအုပ်တိုက်ထုတ် ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ မြန်မာသမိုင်းပုံ စာအုပ်၊ ပထမအကြိမ်၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၄မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။]
This entry was posted on May 23, 2010 at 10:00 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “The First Burmese Migrants’ invasion from China, to colonize and settle in Pagan (in Burmese)”
javeed ansari@umgmgthan(javedthan). Says:
May 15, 2012 at 10:44 pm | Reply
yr presantation is very useful . thankyou .
May 23, 2012 at 5:16 am | Reply
February 27, 2013 at 10:06 am | Reply
Andrew Soe ” မြန်မာ လူမျိုး အဘယ် ကလာသနည်း မေးသောကြောင့် ဖြေပါသည် ”
” မြန်မာ (MIEN မီယန် မျှန့်) အမည်ခံ လူမျိုးတမျိုးသည် တရုပ်နိုင်ငံ ယူနန်နယ် အနောက်ပိုင်း ကန်စုဒေသမှ တဆင့် ကျောက်ဆည်နှင့် မန္တလေး လွင်ပြင် ဒေသသို့ ၀င်ရောက် နေထိုင်လာကြသည်ဟု ဗမာပညာရှင်များက ဆိုသည်။ ထိုထက်မက သာဂီဝင် မင်းမျိုးဟု ဆိုကြပြန်သည်။ သာဂီဝင်သည် အိန္ဒိယ၊ မျန့်သည် တရုပ် လွန်စွာ ဝေးကွာလွန်းလှသည်။ ထို့ပြင် ပုဂံမင်း ၅၅ ဆက်တွင် သာဂီဝင် မင်းတပါးမျှ မရှိသလို မျန့် မင်းလည်း တယောက်မှ မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်”
“ပုပ္ပါးပုဂံမင်း ၅၅ ဆက်တွင် ၄၂ ဆက်မြှောက် သီရိအနုရုဒ္ဓဒေ၀ (၄၀၆ – ၄၃၉) အနော်ရထာ (ပါဠိပျက် အနှောရသား၊ ဗိုလ်မင်းထောင်နေ ရခိုင်သားတို့၏ စကား) ကိုစံထား၍ ရှေ့မင်းများမှာ စုက္ကတေး ကွန်းဆော် ကျဉ်စိုး တောင်သူကြီး ကြောင်ဖြူ စောရဟန်း ငတပါး စလေငခွေး သိန်းခိုးမင်း ရွှေမောက်တော် ရွှေအုန်းသီး ထွန်ချစ် ထွန်ပစ် ထွန်ထိုက် ထီးမင်းယဉ် ယဉ်မင်းပိုက် ပိုက်သေလေ သေလေကြောင် ကြောင်ဒူရစ် ပျဉ်ပျား စောခင်နှစ် သမုဒရစ် ဤမင်းအားလုံးမှာ ပျူမင်းများ ဖြစ်သည်။ အနော်ရထာမင်း နောက်မှ ဆက်ခံသော မင်းများမှာ စောလူး ငရမန် ကျန်စစ်သား အလောင်းစည်သူ နရပတိ စသည် တို့မှာလည်း ပျူ လူမျိုးများချည်း ဖြစ်နေသည်”
“ဤပုဂံခေတ် အုပ်ချုပ်သူ အားလုံးမှာ ပျူ လူမျိုးများသာဖြစ်၍ ဗမာသမိုင်းဆရာ များကမူ အနော်ရထာမင်းမှစ၍ ပထမ မြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်သော မြန်မာမင်းများ ဟုသာဖေါ်ပြကြလေသည်။ဗမာတို့၏ လက်ဆုပ် လက်ကိုင် မပြနိုင်သော ကန်စုဒေသမှ မျန့်ယဉ်ကျေးမှုသည် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ၀တ်စားဆင်ယင်မှု အပြည့်အစုံနှင့် ရှိနှင့်ပြီးသော ပျူယဉ်ကျေးမှုမှ မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်လာခြင်းသည် သမိုင်းလိမ် သက်သက်သာ ဖြစ်လေသည်”